Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Josip Ilicic Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Ha Na-adịghị Eke Ndụ
Ihe omuma anyi nke Josip Ilicic na-agwa gi ihe omuma banyere akuko nwata ya, Nku mbido ya, ndi nne na nna, ezin’ulo ya, nwunye ya, umuaka ya, ndu ya, uru ya na ndu mmadu.
Na nkenke, nke a bụ akụkọ banyere njem ndị ịgba ọsọ Slovenia, site na nwata, rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ ịgụ akụkọ ọdịnala gị sie ike, nke a bụ oge ọ bụ nwata rue ụlọ okenye - nchịkọta zuru oke nke Josip Ilicic's Bio.
Marko Arnautovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Akụkọ ndụ nke Josip Ilicic.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya ịmepụta, nyere aka na akara goolu dịka a hụrụ na oge 2019/2020 super ya maka Atalanta BC
Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle mbipụta anyị nke Josip Ilicic's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Josip Ilicic Childhood Akụkọ:
N'ihi na Biography EBIDO, ọ na-eburu aha otutu “Iliciclone“. Josip Iličić mụrụ na 29th ụbọchị nke Jenụwarị 1988 n'obodo Prijedor na Bosnia na Herzegovina.
A mụrụ ndị na-agba ọsọ ọkachamara nke Slovenia nne ya, Ana na nna ya a ma ama nke na-abịaghị n'oge ederede.
You maara na Josip bụ mba Slovenia nke agbụrụ agbụrụ na agbụrụ ezinụlọ Croatian?
Knowsntanetị amachaghị banyere nne na nna Josip Ilicic.
Ọ dị naanị otu afọ mgbe nna ya nwụrụ na ezinụlọ Josip Ilicic bi na ihe mgbu ma gaa n'ihu.
Mgbe nke ahụ gasịrị, nne Josip gbagoro foduru nke obere ezinụlọ si n'obodo Bosnia nke Prijedor agha tisasịrị gaa Kranj egwuregwu egwuregwu nke Kranj na Slovenia.
Ọ bụ n'obodo Kranj ka Josip tolitere n'egwuregwu bọọlụ n'akụkụ nwanne ya nwoke nke okenye -Igor n'ime ụlọ ha.
Egwuregwu ahụ bụ ụzọ mgbapụ maka ụmụnna karịsịa Josip bụ ndị nwere echiche ọjọọ banyere agha Bosnia nke mere ka ezinụlọ ya ghọọ ndị gbara ọsọ ndụ na Slovenia.
Josip Ilicic Early Afọ na Football:
Ka ọ na-erule oge Josip dị afọ 6-7, ọ gbadoro ụkwụ ịgbaso nzọụkwụ nwanne ya nwoke nke okenye site na isonye na ọgbakọ Triglav Kranj.
Ọzụzụ na klọb bụ ụwa ọhụrụ na ahụmịhe maka onye na-eto eto nke na-egwuri egwu n'ime ụlọ.
Site na mgbe Josip malitere ọzụzụ na klọb nwata ya - Triglav Kranj, o doro anya na bọọlụ bụ egwuregwu kwesịrị ekwesị maka ya.
N'ihi ya, o nyere egwuregwu ahụ ihe niile ruo ihe karịrị afọ iri (1995-2006) tupu ya abanye na Bristof maka otu afọ.
Triglav Kranj bụ ebe o nwere akụkụ ka ukwuu n'oge ntorobịa ya.
Njikọ aka na-esote bọọlụ hụrụ Josip ka ọ malitere igwu egwu Bonifika Koper ebe o mere egwuregwu izizi mbụ ya.
Mgbe ọ na-egwu egwuregwu bọọlụ nke abụọ nke Slovenia maka Bonifika, Josip emeghị ihere igosipụta talent ya nke na-adọrọ uche Interblock.
Mgbe Josip mechara bịaruo Interblock na 2008, ọ gbaara ngwa ngwa iji guzobe onwe ya na klọb site n'ịrụ ọrụ iji bulie otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma na atụmanya kachasị elu nke Slovenian football.
Foto a na - adịghị ahụkebe nke midfielder na Interblock.
Josip Ilicic Bio - Tozọ Gara Akụkọ nke:
Otú ọ dị, ihe malitere ịga n'ebe ndịda maka Josip mgbe Interblock tara ahụhụ n'oge 2009-10 oge.
Mgbe nke a gasiri, Interblock mere otutu mgbanwe nke huru na onye nlere anya nke Midfield na ndi otu ndi otu ndi otu n'agbanyeghị na ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu kacha mma.
Afọ 21, Josip chere na ya enwetalarị nkụda mmụọ nke ndụ ma chee echiche ịkwụsị ọrụ ịgba egwu ya. Naanị izu ole na ole ka e mesịrị, ọ nwetara oku na-agbanwe ndụ site na Maribor nke chọrọ ịbanye ya na klọb.
Josip Ilicic Biography - Akwụkwọ akụkọ ndụ Josip Bilie na Akụkọ Ama:
N'ịbụ onye nwere obi ụtọ maka Josip, ọ nara onyinye ahụ wee gaa n'ihu na-enwe mmetụta dị ukwuu na klọb ebe o meriri ihe mgbaru ọsọ dị mkpa na UEFA Europa Njikọ egwuregwu n'oge otu oge ya na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọbụna mgbe Josip malitere igwu egwu n'Italytali, ọ nọgidere na-enwe ọkwá ya dị ka onye na-egwu egwu egwu na-amalite site na Palermo ruo Fiorentina.
Ọsọ ọsọ gaa n'oge ederede Josip na-enye ọrụ dị mma na Atlanta, klọb ọ sonyere na 2017 site na Fiorentina.
Soro ndị egwuregwu klọb sonyere Papu Gomez na Duvan Zapata, Josip nyeere aka hụ klọb ahụ ka ọ rụchaa ọkwa 3 nke mbụ na Serie A, na-enweta klọb ahụ ebe ọ bụ na asọmpi ndị otu egwuregwu nke asọmpi 2019-20 UEFA Champions League maka oge izizi.
Ya na Papu Gomez, Duvan Zapata na ndị ọzọ rụkọrọ ọrụ iji nyere Atlanta aka ịdekọ ihe ndị mezuru n'oge oge 2018-19.
Nwanyị Josip Ilicic Girlfriend, Nwunye na Kidsmụaka:
N'ịga n'ihu na ndụ Josip Ilicic, ọ nwere mmekọrịta alụmdi na nwunye na-enweghị isi na-aga n'ihu na ngalaba ahụ, n'ihi enyi ya nwanyị tụgharịrị nwunye - Tina Polovina.
Josip zutere Tina na 2009 mgbe ọ bụ onye na-eme egwuregwu na-agba ọsọ na 400 - 800 mita agbụrụ na ebe Josip zụrụ.
Josip Ilicic na nwunye ya Tina Polovina.
Ha malitere ịlụ ma mechaa lụọ. Ka a sịkwa ihe mere na ọ nweghị ndekọ banyere Josip inwe enyi nwanyị ndị ọzọ n'oge ahụ n'ihi na Tina zuru oke maka ya.
You ma na emume obi ụtọ Josip na-eme bụ maka Tina mụrụ ụmụ nwanyị abụọ? Josip Iliccic na Tina bụ nne na nna nye Sofia na Victoria dị n'okpuru.
Zute Josip Ilicic's daugthers Sofia na Victoria.
Ndụ Josip Ilicic Family:
Mgbe ọ bụla Josip Ilicic gụrụ ngọzi ya, ọ na-agụta ezinụlọ ugboro abụọ ma ghara iche n'echiche ihe gaara eme ya na enweghị nne ya na nwanne ya nwoke.
N’akụkụ a, anyị na-enye gị ozi ndị ọzọ gbasara nne na nna Josip Ilicic na ndị ezinụlọ ya.
Banyere Josip Ilicic nna na nne:
Ndị nne na nna Josip Ilicic - nna ya na nna ya nwụrụ anwụ sitere na mgbọrọgwụ ezinụlọ Croatian. A na - ekwu na nna Josip nwụrụ na Bosnia agha lụrụ mgbe ọ dị afọ.
Agbanyeghị, amabeghị ma ọnwụ ya ọ bụ n'ihi agha ka ọ bụ nke sitere n'okike.
Ọ bụ nne Josip zụlitere ya na ezinụlọ ezinụlọ ya na obodo Kranj na Slovenia. Onye na-eto eto na-ekele ya maka ịrụ ọrụ dị mkpa n'ịhụ ka ọ debanyere aha ya na Triglav Kranj.
Banyere Josip Ilicic ụmụnne na ndị ikwu:
Josip enweghị ụmụnne nwanyị mana ọ bụ obere nwanne nwoke aha ya bụ Igor. Ha na Josip toro na-agba bọl na-eso nzọụkwụ Josip.
Eziokwu banyere nna nna Midfielder amaghi nke nne na nna nna ya na nna nna ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya nwoke amabeghị n'oge edere.
Josip Ilicic Ndụ Onwe Gị:
Kedu ihe ndị Josip mere na kedụ ka ndị mmadụ si ahụ ya na mpụga bọọlụ? nke a bụ naanị ebe kwesịrị ekwesị iji dịrị ka anyị na-egosipụta àgwà nke onye na-eme egwuregwu nke na-akọwakwa mmadụ nke ndị zodiac bụ Aquarius.
Ọ bụ onye nyocha, pụrụ iche, dị njikere ime ihe, na-akwanyere ugwu ma ghara ikpughe eziokwu banyere ndụ onwe ya na nke onwe ya.
N'èzí football Josip nwere mmasị n'ịkụ basketball, golf, igwu mmiri, ịkụ azụ na iso ndị ezinụlọ ya na ndị enyi ya nọrịa.
Ishingkụ azụ bụ ihe ọ na-eme maka ezumike.
Josip Ilicic Web:
You maara na Josip Ilicic nwere ọnụọgụ ego ruru ihe karịrị $ 10 Nde n'oge edere akụkọ ndụ a?
Isi mmalite ego ya bụ ụgwọ na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ elu-elu ebe ịkwụ ụgwọ site na nkwado na-eme ka akụ na ụba ya na-arị elu.
Dị ka ndị a, Onye na-egwu egwuregwu bọọlụ nwere ike ịbanye n'ụgbọ ala ndị mara mma ma biri na ụlọ ma ọ bụ ụlọ dị mma. Ọ na-ahụkwa inwe oge zuru oke na ebe ntụrụndụ ndị dị elu ebe ọ na-atọ ụtọ ezumike ya.
Ọ bara uru karịa $ 10 ma ọ naghị eme ihere ịnụ ụtọ ihe ụtọ nke ndụ.
Eziokwu gbasara Josip:
Tupu anyị akpọọ ya ihe etinyere na akụkọ akụkọ nwata Josip Ilicic na akụkọ ndụ ya, ebe a bụ akụkọ amachaghị ma ọ bụ akụkọ a na-akọwaghị banyere ya.
Dị ka n'oge ederede, nkwekọrịta nke ndị ọkachamara na Slovenia Atalanta BC na - eme ka ọ nweta ego nke € 2,778,000 kwa afọ. Rungwọ ụgwọ ụgwọ Josip Ilicic na ọnụọgụgụ, anyị nwere mmebi na-eso.
Ntinye ego buru ibu na EUROS (€)
Kwa afọ € 2,778,000
kwa ọnwa € 231,500
Kwa Izu € 57,875
Kwa .bọchị € 8,268
Kwa elekere € 344.5
Kwa Nkeji € 5.74
Sekọnd € 0.10
N'ebe a, anyị agbakwunyela ụgwọ ụgwọ Josip Ilicic na Sekọnd ọ bụla, na-agbakwụnye ya ego n'ime nkeji nke abụọ.
Ebe ọ bụ na ị malitere ile Josip Ilicic'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Ị maara?… Ọ ga-ewe onye ọrụ nkezi bi na Europe opekata mpe 10 afọ irite otu dika Ihe njakịrị na-akpata na 1 ọnwa.
Josip Ilicic Religion:
Amabeghị ihe banyere okpukpe Josip n'oge ede. Agbanyeghị, ihe dị iche iche dị na ya bụ onye kwere ekwe n'agbanyeghị agbanyeghị na ya agaala okpukpere chi mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ na ebe a na-enwe akwụkwọ akụkọ.
Rkpụrụ nke FIFA:
Josip nwere ọkwa FIFA niile gbasara 84 n'oge edere. Ee, ogo ahụ nwere atụmanya nke ịbawanye site na afọ, ọ ga-abụ ihe obi ụtọ nye ndị ọkpọ na-akwado ya maka egwuregwu FIFA.
Ntụle ya dị mma ma nwee atụmanya ịrị elu.
Smụ sịga na Mmanya:
Onye na-agba bọọlụ anaghị a smokeụ sịga, a naghị enye ya mmanya mgbe a na-ede ya. Kama ọ na-elekwasị anya n'ịdị ndụ ahụ ike nke nwere ike iguzogide nrụgide nke ịgba bọl elu.
Dị ka N'Golo Kanté, David Luiz na Mohammed oluji, Isi ihe nwere ike bụrụ ihe ikpeazụ gbasara ndepụta mmasị Josip dị ka oke mma ya nke 1.9 m tinyere anya ya tozuru etozu na-eme ka ọ bụrụ onye egwu egwu na-awakpo ndị na-agbachitere ya.
Ihe Ọmụma Ihe Wiki
N'akụkụ ikpeazụ a nke Josip Ilicic's Biography Eziokwu, ị ga-ahụ isi ihe ọmụma Wiki ya. Nke a ga - enyere gị aka ịchọta ozi banyere ya n'ụzọ dị nkenke ma dị mfe.
Andbọchị na ebe ọmụmụ: 29 Jenụwarị 1988 (Prijedor, SFR Yugoslavia)
Age: Afọ 32 (n'oge a na-ede ya)
elu 1.9 m ma ọ bụ 1.90 m (6 ft 3 na)
Nna Mbubreyo Iličić
Nwunye: Tina Polovina
Children: Sofia na Victoria
Ndị na-asọpụrụ klọb: (i) iko Slovenian: 2008–09
(ii) Ndị na-agba ọsọ Slovenian Supercup: 2009
(iii) Ndị na-agba ọsọ Slovenian Supercup: 2010
(iv) Coppa Italia onye na-agba ọsọ: 2010–11
(vi) Onye na-agba ọsọ Coppa Italia: 2013–14
(vii) -gba ọsọ Coppa Italia: 2018-1
Egwuregwu Ọnọdụ: Ibuso onye na-etiti obodo agha
Onye Nwepuru: erie Otu Afọ: 2018–19
(ii) logba egwu Slovenian nke Afọ: 2019
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Josip Ilicic Childhood Story Plus Ihe Mere Untold Biography Eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Luke Jovic Child Story Plus Na-adịghị agbanwe akụkọ ndụ
José Gimenez Ụmụaka Akụkọ Gbasara Eziokwu Ndị Na-adịghị Eke